wararka maanta-arlaadii.net » Turkiga iyo Emaraadka oo Mar kale hadalo kul kul is dhaafsaday
Xubno ka tirsan dowladaha Turkiga iyo Imaaraatiga ayaa markale warbaahinta isu mariyey hadalo kulul, xiisada labada dal ka dhex taagan ayaa sii xumaaneysay bilihii lasoo dhaafay.
Xiisadan cusub ayaa bilaabatay kadib markii Wasiir dowlaha Arrimaha Dibada ee UAE, Anwar Gargash uu bartiisa Twitter ku qoray qoraal uu ku sheegay in laga doonayo in Turkiga uu ixtiraamo oo tixgeliyo madax banaanida dalalka Carabta.
Waxaa isaguna u jawaabay Ahmet Berat Conkar oo ah Xildhibaan ka tirsan Xisbi Xaakimka AK ee dalka Turkiga, kaasi oo sheegay in Turkiga uu xiriir fiican la leeyahay inta badan dalalka Carabta, isla markaana Wasiirka imaaraatiga uusan u hadli karin wadamada Carabta oo uu ku koobnaado dalka uu matalo ee Imaaraatiga.
Xildhibaan Ahmet Berat Conkar ayaa sheegay in Imaaraatiga uu wado olole ka dhan ah Turkiga, isla markaana ay dano gaar ah ka leeyihiin. Wuxuuna iska fogeeyey eedeynta ah in Turkiga gacan siiyo kooxo doonaya inay xukunka ka tuuraan qoysaska maamula dalalka Khaliijka.
“Anagu ma taageerno koox dooneysa inay xukunka ka tuurto dowladahaasi Khaliijka, balse Imaaraatiga ayaa isagu ah kan khal khalka ku wada dalalka uu jaarka la yahay, isla markaana sida tooska ah u taageeray inqilaabkii Militari ee ka dhacay dalka Masar ee xukunka looga tuuray Madaxweynihii shacabka doorteen ee Maxamed Morsi.”Ayuu yiri Xildhibaanka u hadlay Xisbi Xaakimka Turkida.
Shabaab Iyo Ciidamada Dawlada oo Ku Dagaalamay Magalada Muqdisho